Nhau - Nhanganyaya kune Seamless pombi
Seamless mativi pombi mhando yesimbi refu ine mhango chikamu uye hapana majoini akaikomberedza.Steel pombi ine mhango chikamu inoshandiswa zvakanyanya kuendesa mvura, senge kuendesa mafuta, gasi rechisikigo, gasi, mvura uye zvimwe zvikukutu. uye imwe yakasimba simbi, simbi chubhu rudzi rwehupfumi chikamu chikamu simbi ine yakafanana flexural uye torsional simba uye kureruka uremu. Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwezvikamu zvemakiriniki uye zvemuchina zvikamu, senge mafuta anochera pombi, mota yekufambisa shaft, bhasikoro furemu uye simbi scaffolding inoshandiswa mukuvaka.Kushandisa simbi chubhu kugadzira mhete zvikamu zvinogona kuvandudza mashandisiro ezvinhu, kurerutsa kugadzira maitiro uye chengetedza zvinhu uye nguva yekugadzirisa, sekupeterera kubereka bushing.
Parizvino, simbi pombi rave richishandiswa kushandiswa kugadzira iyo mhete uye jack sleeve.Steel pombi kana akasiyana echinyakare zvombo akakosha zvinhu, pfuti dhiramu, dhiramu kune simbi mutopota kugadzira.Steel machubhu anogona kukamurwa kutenderera machubhu uye akasarudzika machubhu zvinoenderana nechimiro chemuchinjikwa-chikamu chikamu.Sezvo denderedzwa riine nzvimbo hombe ine kutenderera kumwe chete, yakawanda mvura inogona kutakurwa muchitenderera chubhu.Ukuwedzera, kana chikamu cheyakavhurwa chikatakura zvemukati kana zvekunze kumanikidzwa, iro simba yunifomu, saka mazhinji esimbi machubhu akatenderera machubhu Zvisinei, iyo yakatenderera pombi zvakare ine zvimwe zvisingakwanisike, senge pasi pechimiro chendege kukombama, iyo yakatenderera pombi haina kusimba sekwere, rectangular pombi yekukotama simba, imwe yekurima michina fomati, simbi uye fanicha yehuni, nezvimwewo, inowanzo shandiswa mraba, rectangular pombi.Mamwe akasarudzika-akaumbwa simbi machubhu ane akasiyana chikamu maumbirwo anodikanwa zvinoenderana akasiyana KUSHANDISWA.
Zvinoenderana nenzira dzakasiyana dzekugadzira dzinogona kuve dzakakamurwa kupisa kupisa rolling, kutonhora kutenderera pombi, kutonhora kudhirowa pombi, extrusion pombi uye zvichingodaro.
1.1. Hot-yakakungurudzwa isina musono machubhu anowanzo gadzirwa pane inozvitenderedza pombi chigayo. Iyo yakasimba chubhu billet yakatemwa muzvikamu mushure mekuwongorora uye pamusoro pehurema zvabviswa.
Iyo yakareba inodiwa ichave yakamisikidzwa kumucheto kumeso kweakapetwa magumo ehubhu billet, uye wozotumirwa kuchoto chekudziya chekupisa uye kupetwa pane chibhakera.
Kuenderera mberi kutenderera uye kumberi, pasi pechiito cheiyo roller uye musoro, isina chinhu mukati zvishoma nezvishoma yakaumba mhango, inozivikanwa seye capillary chubhu.
Kutenderera kunoenderera pane iyo pombi mill.Pakupedzisira, iyo rusvingo ukobvu inogadziriswa nemuchina wese uye hupamhi hunotsanangurwa neye sizing muchina kuti usangane neyakajairwa zvinodiwa.
Kugadzirwa kweyakaipisa simbi isina musono pombi inzira yepamusoro.
1.2. Kune madiki uye ari nani mhando mapaipi asina musono, kutonhora kutonhora, kutonhora kudhirowa kana musanganiswa wevaviri unofanirwa kutorwa.
Nzira.Kutenderera kunotonhora kunowanzoitwa pane maviri-akakwirira mill. Iyo simbi chubhu igomba rakatenderera mune yakatenderera groove ine yakagadziriswa koni musoro uye chikamu chinoshanduka.
Middle rolling.Cold kudhirowa inowanzoitwa pane 0.5 ~ 100T imwechete cheni kana kaviri cheni inotonhora yekudhirowa muchina.
1.3 Mune iyo nzira yekutsvaira, iyo inopisa pombi isina chinhu inoiswa mune yakavharwa extrusion cylinder, uye iyo tsvimbo yakapetwa uye tsvimbo yekuwedzera inofamba pamwechete kuti igadzire
Iyo extruder inoburitswa kubva padiki kufa gomba.Iyi nzira inogona kuburitsa simbi pombi ine diki dhayamita.
2. Chemical kuumbwa bvunzo
2.1 Dzimba dzisina musono machubhu dzinopihwa zvinoenderana nemakemikari anoumbwa uye michina zvimiro, senge zvinhu: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, Astm a106 Astm a53
Makemikari anoumba kwete. Simbi makumi mashanu inotevedzera zviga zveGG / T699-88.Mapaipi ekunze asina musono anozotariswa zvichienderana nematanho akakodzerwa muchibvumirano.
09MnV, 16Mn uye 15MnV simbi yemakemikari anoumba anoenderana nezvinopihwa GB1591-79.
2.2 Tarisa kune chakakodzera chikamu cheGG223-84 Kemikari Kuongorora Maitiro eSimbi neAlloy kune mamwe maitiro ekuongorora.
2.3 Kuongorora Kutsauka Reva kuna GB222-84 "Kutenderera Kunobvumidzwa Kwemakemikari Kuumbwa kweMasampuli uye Zvigadzirwa Zvakapedzwa zveKemikari Kuongorora Simbi".
3. Kuongorora kwekuita kwemuviri
3.1 Pamba isina musono pombi inopihwa zvinoenderana nemaitiro mashandiro, yakajairwa kabhoni simbi zvinoenderana neGG / T700-88 kirasi A simbi yekugadzira (asi inofanira
Iva nechokwadi chekuti sarufa haipfuure ne0.050% uye iyo phosphorus haina kudarika 0.045%), zvimiro zvema mechanical zvinofanirwa kutevedzera tafura yeGB8162-87
3.2 Dzimba dzisina musono dzakapayirwa zvinoenderana ne hydrostatic bvunzo inofanirwa kuona iyo hydrostatic bvunzo yakatarwa mumureza.
3.3 Kuongorora kwekuita kweyekunze isina musono pombi ichaitwa zvinoenderana nematanho akakodzera anotaurwa muchibvumirano.
2.1. Iyo yakazara chinangwa isina musono pombi inogadzirwa neyakajairwa kabhoni simbi simbi uye yakaderera chiwanikwa chimiro
Simbi kana alloy yakaumbwa simbi kutenderera, iyo hombe kugadzirwa, inonyanya kushandiswa kuendesa yemapaipi mapaipi kana echimiro zvikamu.
2.2 Mhando nhatu dzekupihwa zvinoenderana nemaUSESI AKASIYANA: A. Kupa zvinoenderana nemakemikari uye michina zvivakwa; B. Kupa zvinoenderana nema mechanical performance; C,
Mapaipi esimbi anopihwa pasi pemakirasi A uye B anozoiswawo kune hydrostatic bvunzo kana ichizoshandiswa kutakura kumanikidzwa kwemvura.
2.3 Mapaipi asina musvinu ezvinangwa zvakakosha anosanganisira bhaira isina musono mapaipi, geological musono mapaipi uye peturuleum isina musono pombi.
4.1 Zvinoenderana nenzira dzakasiyana dzekugadzira, isina musono simbi machubhu anogona kukamurwa kupisa inopisa yakakungurutswa pombi, kutonhora kwakakungurutswa pombi, kutonhora kwakakweva pombi, extrusion pombi, nezvimwe.
4.2 Kune machubhu akatenderera uye akasarudzika-akaumbwa machubhu zvinoenderana nechitarisiko chavo.Kuwedzera kune akaenzana uye akaenzana emakona machubhu, akasarudzika-akaumbwa machubhu zvakare ane elliptical machubhu, Semicircular, mativi, hexagonal, convex, yakanyorova-yakafanana, nezvimwewo.
4.3 Zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana, inogona kukamurwa kuita yakajairwa kabhoni chubhu, yakaderera alloy dhizaini chubhu, yepamusoro kabhoni dhizaini chubhu uye chiwanikwa junction Pombi yekuvaka, isina waya pombi, nezvimwe.
4.4 Zvinoenderana neicho chakakosha chinangwa, kune maaboiler machubhu, geological machubhu, peturu peturu, nezvimwe.
5. Magadzirirwo uye chimiro chemhando
Seamless pombi zvinoenderana GB / T8162-87 zvigadzirwa
5.1. Tsananguro: Hot yakakungurutswa pombi dhayamita 32 ~ 630mm. Rusvingo ukobvu ndi2,5 ~ 75mm.Cold rinopfungaira (kutonhora kudhirowa) pombi dhayamita 5 ~ 200mm.
Kukora kwemadziro kuri 2.5 ~ 12mm.
5.2 Chitarisiko chemhando: iyo yemukati neyekunze nzvimbo yesimbi machubhu haifanire kutsemuka, zvakapetwa, rolls, delaminations, ndege kana zvikwambo zvinokanganisa.
Kukanganisa kwegore rose. Izvi zvinofanirwa kubviswa zvachose uye ukobvu hwemadziro nehupamhi hwekunze haufanire kupfuudza kukanganisa kwakashata mushure mekubviswa.
5.3 Magumo ese epombi yesimbi anofanirwa kutemerwa mumakona akakodzera uye mabhureki anofanira kubviswa. Gasi kucheka uye kupisa saw saw kucheka zvinobvumidzwa kune machubhu esimbi ane ukobvu hwemadziro hwakakura kupfuura 20mm
Cheka.Haigone kutemwa nechibvumirano pakati pemutengi nemutengesi.
4.4 Iko pamusoro pehunhu hwechando-hwakavhomorwa kana kutonhora-yakakungururwa nemazvo isina musono machubhu esimbi anoreva GB3639-83.
Sezvinorayirwa mu GB2102-88 Kune matatu marudzi esimbi kurongedza kurongedza: kurongedza, kurongedza, kusunga mafuta kana kurongedza mafuta. Simbi chubhu iri Yakareba tambo yesimbi ine mhango chikamu uye isina majoini akaikomberedza.Simbi chubhu ine mhango chikamu inoshandiswa zvakanyanya kuendesa mvura Mapaipi, senge iyo inotakura mafuta, gasi rechisikigo, gasi, mvura, uye zvimwe zvinhu zvakaoma. Inofananidzwa nesimbi yakakomberedza uye imwe simbi yakasimba, Iyo mhando yemari inodarika muchinjikwa-chikamu simbi ine yakafanana inoshanduka uye torsional simba uye huremu hwakareruka. Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kwezvikamu zvakaumbwa uye zvemuchina zvikamu.
Senge pombi yekukora yemafuta, mota dhiraivha shaft, bhasikoro furemu uye simbi scaffolding inoshandiswa mukuvaka.Ring zvikamu zvakagadzirwa nesimbi machubhu, Inogona kunatsiridza zvinhu mashandisiro, kurerutsa mukugadzira muitiro, kunze zvinhu uye kugadzira nguva, akadai rinopfungaira inobereka mhete, Jack ruoko, etc.
Parizvino, simbi pombi rave richishandiswa zvakanyanya mukugadzira.Steel pombi kana akasiyana echinyakare zvombo akakosha zvinhu, pfuti dhiramu, dhiramu, nezvimwewo.
Simbi machubhu anogona kuganhurwa kuita machubhu machubhu uye akasarudzika-akaumbwa machubhu zvinoenderana nechimiro chemuchinjikwa-chikamu chikamu nzvimbo.Sezvo mukomberedzo wakafanana, pamusoro wedenderedzwa
Kunonyanyisa vhoriyamu, yakawanda mvura inogona kutakurwa mudenderedzwa chubhu Mukuwedzera, chikamu chemhete chinoiswa mukati kana kunze kwekunze kumanikidzwa
Simba iri yunifomu, saka mazhinji esimbi machubhu akatenderera machubhu.
Nekudaro, iyo pombi inewo zvimwe zvaisingakwanise. Semuenzaniso, pasi pemamiriro ekuiswa pasi pendege kukotama, pombi haigadzike kukombama kupfuura pombi yakaenzana uye pombi yakakona.
Simba rakakura, furemu yemashini mashoma epurazi uye kuita, simbi huni fenicha inowanzo shandiswa mraba, rectangular chubhu.Zvimwe zvikamu zvemuchinjikwa zvinodiwa maererano neUSES dzakasiyana
Yakaumbwa yakaumbwa simbi pombi Inofanirwa kuve yakabatana nehupamhi hwakawanda: inoyerera yekuchinjisa pombi, bhaira chirimwa, mainjiniya, michina yekugadzirisa zvirimwa.